Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » News Sustainability » I-Etihad, i-Boeing, i-GE, i-Airbus kunye neRolls Royce kwintsebenziswano entsha yozinzo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • News Sustainability • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-Etihad, i-Boeing, i-GE, i-Airbus kunye ne-Rolls Royce kwintsebenziswano entsha yozinzo.
Ngaphandle kwempembelelo ye-Covid19 kuphapho lwehlabathi, inkqubo ye-Etihad's Greenliner iphumeze amanyathelo angundoqo uzinzo ngo-2020 kunye no-2021 ukuvavanya nokuphuhlisa izisombululo zexesha elide ze-decarbonization kwisicelo sorhwebo.
I-Etihad Airways isayine izivumelwano ezininzi zentsebenziswano kunye nentsebenziswano kwi-2021 Dubai Airshow.
Eyokuqala ye-Etihad's A350's, esungulwe namhlanje kwi-Dubai Airshow njenge "Sustainability50", iphethe i-"UAE50" eyodwa.
Umsebenzi we-Etihad kunye ne-Boeing, i-GE, i-Airbus kunye ne-Rolls Royce ixhasa iinjongo ezicwangcisiweyo zokufezekisa ukucutha kwe-20% yokunciphisa ukukhutshwa kwe-emissions intensity kwinqwelo yabakhweli bayo ngo-2025, ukusika i-2019 i-net emissions nge-50% ngo-2035, kunye nokufikelela kwi-net zero emissions ngama-2050 ngama-XNUMX.
Etihad Airways utyikitye izivumelwano ezininzi zentsebenziswano kunye nentsebenziswano kunye nabavelisi abaphezulu, ababoneleli kunye nabachaphazelekayo kwi-2021 Dubai Airshow, izisa imibutho ehamba phambili yezophapho kunye phantsi kwenkqubo yokugcinwa kobuchule bokuqhuba i-decarbonization idala intsebenziswano yemibutho emininzi ebanzi yokunciphisa ukukhutshwa kweCO2 kwihlabathi jikelele. .
Inkqubo yozinzo yenkampani yenqwelomoya, ukuza kuthi ga ngoku igxile kwiinqwelo zeenqwelo moya ze-GEnX iBoeing 787's phantsi kweNkqubo yeGreenliner, ngoku iza kunconywa yinkqubo efanayo egxile ekwandiseni amathuba akhoyo ngokubandakanywa kweenqwelo zeenqwelo zeRolls Royce XWB ezinikwa amandla i-Airbus A350. Eyokuqala ye-Etihad's A350's, eqaliswe namhlanje kwi-Dubai Airshow njenge "Sustainability50", iphethe i-livery "UAE50" ekhethekileyo ekuqapheliseni i-50.th isikhumbuzo somdibaniso we-UAE kunye nokuzibophelela kwenkampani yeenqwelomoya ekujoliswe kuko ngowama-2050 kokukhutshwa kwekhabhoni engenaziro.
EtihadUmsebenzi kunye namaqabane kuquka iBoeing, I-GE, i-Airbus kunye ne-Rolls Royce isekela iinjongo ezicwangcisiweyo zombutho ukuphumeza ukuncipha kwe-20% kwi-emissions intensitet kwi-assenger fleet ngo-2025, ukusika ukukhutshwa kwe-2019 nge-50% ngo-2035, kwaye ufikelele kwi-net zero emissions ngo-2050.
Ethetha eDubai Airshow, uTony Douglas, iGosa eliLawulayo leQela, i-Etihad Aviation Group, uvume ukumanyaniswa kwaba badlali beshishini kwi-decarbonation linyathelo elikhethekileyo nelibalulekileyo eliya phambili kolu shishino: “Akukho bullet yesilivere kule, akukho nto icacileyo. oko kuya kunika isisombululo. Izakufuna indibaniselwano kunye nesimbuku semibutho emininzi eyahlukeneyo kunye noorhulumente abasebenza kunye kuphuculo oluncinci, olongezelelweyo.
“Oorhulumente kunye nabalawuli kufuneka bancede ishishini ukuba liqhube izinto ezintsha kwizisombululo zexesha elide zokususa ikhabhon kwinqwelomoya. Inkxaso iyafuneka kuphuhliso lobonelelo olufikelelekayo nolwaneleyo lwamafutha azinzileyo. Ukuphucula iindlela zokuhamba ngenqwelomoya kwezona ndlela zixakeke kakhulu emhlabeni kuya kuthintela iimali ezingaxekiyo ze-Co2 ekumpompelweni emoyeni. Kukho ithuba elikhulu apha elingafuni nabuphi na ubuchwephesha obutsha bokuphumeza kwaye linokuphunyezwa namhlanje ukuba bekukho umyolelo.